UPHENGULULO LWEHAMILTON DISNEY PLUS | NGABA ILUNGILE NJENGASEQONGENI? -RADIO TIMES - UMDLALO WEQONGA
Inguqulelo yeTV kaHamilton ikubeka kwigumbi apho yenzeka khona-kwaye ayinakuba ngcono
5.0 ngaphandle kweenkwenkwezi ezintlanu
Akusiyo imfihlo ukuba uHamilton ungomnye wezona zinto ziqaqambileyo, ezithandwa kakhulu, ezona zihlaziyiweyo zomculo ezenziweyo. Kwaye unokukholelwa i-hype! Umboniso weqonga yinto eyenzekileyo ukusukela oko yaqala ukubetha iNew York ngo-2015, yaba lelona tikiti lishushu edolophini kwaye yaphumelela imbasa yeeTony Awards; xa imveliso yaseLondon ivulwa eWest End kwiminyaka emibini kamva, yafumana uphononongo olukhulu kwaye yathengiswa kwangoko.
Ngamaxesha aqhelekileyo, oko kwakuthetha ukuba wawungenakumbona uHamilton ngaphandle kokuba u-a) ungazifikela eNew York okanye eLondon, okanye esinye sezixeko kukhenketho lwaseMelika; b) wayenemali ayigcinayo, okanye waba nethamsanqa kwilottery; c) wasebenza ngokukhawuleza ukubhukisha amatikiti xa ethengisa. Kwaye ngoku, ewe, akunakwenzeka ukubona uHamilton ephila konke konke ngenxa yesifo secoronavirus.
Kodwa! UHamilton sele eza kuza kwi okuninzi abantu abaninzi babulela kumandla kamabonwakude. Kungenxa yokuba ngolwesiHlanu umhla we-3 kaJulayi 2020, iDisney Plus ikhupha ukurekhodwa komboniso weqonga njengemovie- kwaye ungayibukela naphina emhlabeni, amaxesha amaninzi njengoko uthanda, ngexabiso lokurhuma ngenyanga okanye ngonyaka.
IHamilton ikwiDisney + nge-3 kaJulayi, bhalisela i- £ 59.99 ngonyaka kunye ne- £ 5.99 ngenyanga.
Ukuba awuzange umbone uHamilton ngaphambili, uza kufumana unyango. Umbhali / umbhali weengoma / umdlali weqonga / imvumi / umntu ocaphukisayo onetalente yokuyila uLin-Manuel Miranda ulingise ubomi buka-Alexander Hamilton, (ngaphambi kwalo mculo) wayengomnye woo-Fathers baseMelika abangaphantsi.
Simbona efika eMelika evela kwiCaribbean njengomntu ohluphekileyo, okrelekrele, umfana onoburhalarhume ozimisele ukuzibonakalisa, kwaye siyabona ukunyuka kwakhe kwiMfazwe yeNguquko, indima yakhe ekwakheni urhulumente wesizwe, umtshato wakhe, ukuba ngutata, ukuwa kwakhe kwezopolitiko. , yaye ekugqibeleni wafa ngaphambi kwexesha. Eli libali lemvelaphi yelizwe, kodwa ikwangumxholo wendoda ebhala ngathi iphelelwa lixesha, ivutha ngokuqaqambileyo, iba yi-Icarus ebhabhe isondele kakhulu elangeni. Ikwafaka itoni yabamnyama, uhlanga oluxubekileyo kunye nabadlali baseAsia njengabalinganiswa abaphambili kwimbali yaseMelika, eyindlela enamandla yokubalisa eli bali. Kukho amaxesha anokukwenza uncume kwaye uhleke, kunye namaxesha aya kwenza iinyembezi ziqengqele izidlele zakho.
Kodwa ukuba ubonile uHamilton kwindawo yemidlalo yeqonga (njengam, uxolisa ngokuqhayisa) uya kube uyazibuza: ingaba amava wokubukela umboniso eqongeni ahlangana njani ukuze ubukele iTV?
Ewe, kunjalo, kukho izibonelelo ezinzulu ekubukeni imidlalo yeqonga ukusuka kwinduduzo yekhaya lakho, njengoko uninzi lufumene ngexesha lokutshixa ngelixa ubukele usasazo oluvela kwiTheatre kaZwelonke, kwiGlobe nokunye. Awunyanzelekanga ukuba uchithe ixesha uzama ukufumana izandla zakho kwikomityi yeplastikhi yeewayini enexabiso elingaphezulu, okanye ulinde ngokuxhalaba kulayini omde wendlu yangasese kwaye uthandazela ukuba intsimbi ingakhali ngaphambi kokuba ungene kwi-cubicle; endaweni yoko ungasela nantoni na oyithandayo, kwaye uye kwi-wee nanini na xa ufuna.
Kwaye ukuba sele uwazi onke amagama kuzo zonke iingoma zaseHamilton, unokucula ngaphandle komntu (ngokufanelekileyo) akufundise okanye akuxelele. (Angelica, Eliza, AND PEGGY !; Cwaka! Khange ndihlawule ziibhiliyoni zeerandi ngetikiti lokuva wena cula!)
Kodwa kufuneka ndivume: Ndiyayikhumbula imilingo yeqonga. Kwaye yayisisihlandlo esingakanani ukubona uHamilton ngobuqu! Ngexesha endaya ngalo ngo-Epreli 2018, ndandibe ndibambelele kumatikiti ngaphezulu konyaka kwaye andinakuba nemincili ngakumbi. Ukujonga njengoko imiqolo yezihlalo zevelvet igcwaliswa ngabantu, ukuva isikhuthazi sencoko yabalindeleyo, ukuziva ulindelo lomoya! Ukujonga phezulu kuphahla oluhle olusezantsi lweVictoria Palace Theatre! Kwaye emva koko ndiyibukele yonke ityhila eqongeni phambi kwamehlo am! Amava aphilayo yayiyinto yonke endinethemba lokuba iya kuba yiyo.
Emva koko sichithe ukuphuma kwiminyango yeqonga sinobulungisa ugqithile into edibeneyo, ethwele ubumnandi bomboniso ngaphandle kwizitrato zaseLondon njengobuncwane obabiweyo. Mhlawumbi ndiyayithanda kancinci kuba bendipheke ekhaya ekutshixeni ixesha elide, kodwa kukho into ekhethekileyo ngeqonga, uyazi?
Ngombulelo, iqela elizise uHamilton kwiscreen esincinci liyawaqonda amandla emidlalo yeqonga ngokugqibeleleyo. UMlawuli uThomas Kail, owayephethe imveliso yaseBroadway yoqobo, uyalele le nguqulo ifotyiweyo- kwaye ukhetho lwakhe luphefumlelwe.
Kuba nyani yenza ingathi usegumbini apho yenzeka khona. Ezinye izithonga zisisondeza kufutshane nabalinganiswa abaphambili kangangokuba ungabona amathe abhabha kwaye ujonge amathontsi okubila ehla ebusweni babadlali, besinika uhlobo lweenkcukacha onokuzibona ukuba ubusezitalatweni (kwaye Amehlo amhle) kodwa uya kuphoswa ukuba ubuphezulu kwisangqa sokunxiba. Kwaye uve abaphulaphuli abakungqongileyo behleka kwaye beqhwaba izandla (ngaphandle kokuphazamisa); kwaye ikhamera ilandela apho ukugxila kwendalo kuya kuba kwinqanaba.
Ke kwakhona, uKail akaze ayityeshele imbumbulu ebanzi esibonisa okwenzekayo kwinqanaba. Amanye amaxesha ade asinike umbono omtsha ngokupheleleyo-njengefoto elandela uKing George ngasemva njengoko ejonge kubaphulaphuli bakhe nakwilitha leenyawo.
Le King George, ewe, hayi iKing George ndayibona eLondon. Inguqulelo oza kuyibona kwiDisney + ibonisa ukusasazwa kwe-Broadway yasekuqaleni, ikhokelwa nguLin-Manuel Miranda njengo-Alexander Hamilton ngokwakhe.
Kwaye lolunye unyango! Kungenxa yokuba nokuba ubunokuya kubona uHamilton kwindawo yemidlalo yeqonga ngoku (ongenakude ube ubuncinci ngo-2021), ngekhe uphinde uyibone le nkampani yabadlali iqhuba umboniso kunye kwakhona. Unokuweva amazwi abo kwiRekhodi yoQeqeshiso lweBroadway, endiye (njengabanye abalandeli bakaHamilton) ndiyimamele ngokuphindaphinda iminyaka eliqela; kodwa ukubabona besenza kwaye bedanisa ngomnye umcimbi- kuba iHamilton ingaphezulu kakhulu kweengoma zayo ezinobukrelekrele, ezinomtsalane nezikrelekrele.
Kwaye ngokuqinisekileyo, u-Alexander Hamilton endimbone kwindawo yokuqala yaseLondon (uJamael Westman) mhlawumbi wayeyimvumi eyomeleleyo, kodwa kusonwabisa ukubona uLin-Manuel Miranda ehlala kumculo awenzileyo. Emva koko kukho uPhillipa Soo njengo-Eliza Hamilton (kunye novakalelo lwakhe kunye nelizwi!) Kunye noLeslie Odom Jr njenge-foil kaHamilton (kunye nombulali wokugqibela) Aaron Burr. URenée Elise Goldsberry usibetha sonke njengo-Angelica Schuyler, kwaye ndiyonwaba xa ndibona le midlalo nguDaveed Diggs (uLafayette kuMthetho 1, Thomas Jefferson kuMthetho 2) noJonathan Groff (King George III). Ngokusisiseko, bonke banetalente engakholelekiyo kwaye sinethamsanqa lokubabona besemsebenzini.
Ngombulelo, umva ngo-2016, umntu othile wayenombono oqaqambileyo wokubamba amalungu okuqala ebala amalungu eFilimu ngaphambi kokuba ahambe. Imifanekiso yathwetywa ngaphezulu kwemidlalo emithathu kaHamilton eRichard Rodgers Theatre kwisiXeko saseNew York, kwaye yayidalelwe ukuba isetyenziswe kuxwebhu lowama-2016 - kodwa ukubanakho kokusebenzisa le nto inkulu kungekudala kwacaca.
I-Disney iphumelele amalungelo kwimfazwe yokubhida, kwaye imovie yeHamilton yayenzelwe ukuba iphume kwiimovie ngo-Okthobha ka-2021. Kodwa ke ilizwe latshintsha. Ngoku silapha ngoJulayi 2020, kwaye uHamilton ufumana ukukhutshwa kwidijithali, kwaye ikwi-TV yam, kwaye indishiyile ndiqaqambile.
Oko bekusithi, ukubukela umboniso kumabonwakude kundikhumbuza kuphela indlela endiyithanda ngayo indawo yemidlalo yeqonga, nokuba banetalente kangakanani abantu abazisa le miboniso eqongeni, kwaye nokuba eli candelo lisokola kangakanani ngoku ngenxa yokutshixeka kunye nenkxaso encinci yezemali kurhulumente. .
Ndisaya kubona uHamilton kwakhona ngobuqu, ukuba ndinako, kwaye ndibone ukukhawulezisa kokusebenza ngoku-kodwa okwangoku, kumnandi ukuba nohlobo olwenziweyo olusondeleyo ukusibeka kwigumbi apho yenzeka khona kunokwenzeka ukufumana.
UHamilton ukuDisney + nge-3 kaJulayi-unako bhalisela i- £ 59.99 ngonyaka kunye ne- £ 5.99 ngenyanga. Uzibuza ukuba yeyiphi imovie oza kuyibukela ngokulandelayo? Jonga isikhokelo sethu kwezona bhanyabhanya zibalaseleyo kwiDisney +, okanye t Jonga ukuba yeyiphi enye into enesikhokelo sethu seTV.
Uphi umhlolokazi oqeshwayo?
Ndiyichane ngqo! Ingaba ingantoni? Ngoobani abagwebi? Kwaye ungathatha inxaxheba njani kuyo?
Ngubani oshiye ukusinda kweyona inamandla? Uluhlu olupheleleyo lwabadlali abangenisiweyo
Uyenza njani i-minecraft
ikiti yomntu utd 2019/20
ikrisimesi carol 2019 tom hardy
imibuzo yemibuzo yoshicilelo kunye neempendulo ngo-2020
Umdlalo wokudlala kumninimzi wentenetya
umgca wexesha lomsebenzi 3 cast